Ndezvipi zvikonzero zvikuru zvakatorwa neAngland kushandiswa kwegorgorithm?
Kana uri kutarisira bhizinesi rako reEcommerce kuAmazon, unofanirwa kunge uchitoziva nezvepfungwa yekutanga yeSearch Engine Optimization (SEO). Inogona kuonekwa seye-brainer, asi imwe huru injini yekutsvaga (seGoogle pachayo, uyewo Yahoo, Bing, etc. ) rine nheyo yayo yekushandura - rideauwood addiction family services. Kunyange zvakadaro, vazhinji vezvemabhizimusi vekutengesa kutengesa uko vasati vachiziva kuti huripo huno ma Amazon inoshandiswa neakashonga. Ndicho chikonzero pasi apa ndichaenda kukuratidzai zvinhu zvinonyanya kukoshesa ma Amazon ekugadzirisa algorithm kuri kutengesa, zvakatsigirwa nezvinhu zvekutanga zvekushandisa kwekugadzirwa kwezvinhu zvakagadzirwa nezvikamu. Nenzira iyo, iwe unonzwisisa maitiro ekugadzira zvigadzirwa zvehutano zvejiji rako peji. Pakupedzisira, kuwana chigadzirwa chako chinopa pamusoro peAmazon search kutsvaga pakati pezvinhu zvakatengesa kutengesa.
Pasi peji SEO Factors for Amazon Ranking Algorithm
Pano pane zvinhu zvinokosha zvinowanika pane peji yezvigadzirwa zvinogadzirisa Amazon tsvina yako. Kuziva ivo vose kuchakubatsira kunyatsonzwisisa zvinofanirwa kuitwa nehuwandu hwezvigadzirwa zvekutengeserana kwehuwandu hwekutengesa kushanda uye kuonekwa kwako kwepaIndaneti kwakavandudzirwa kusvika kune chidimbu chitsva.
Tsamba yako yemugove ndiyo chikamu chokutanga chema Amazon yako peji yemuiti inotakura kukosha kwe SEO pamusoro apo. Zvakawanda sezvo kana zvichienderana nemichina yekutsvaga injini, Amazon inonzi ranking yakashandurwa zvakanyanya neyo musoro weti tag. Nenzira iyo, unosvika mazana mashanu emhando dzaunogona kushandisa yako zvakanakisisa-zvakakoshwa mazwi makuru uye huru yekutsvaga mutsva yekutsvaga kutsvaga nokuda kwekutsvaga kutsvaga kutsvaga paIndaneti pamusoro apo.
Ndiyo chikamu chinotevera cheji yako yezvigadzirwa zvakawanikwa pasi pechikamu chechibereko. Kunyange zvazvo pasina humwe hurumende huchapupu huri kuratidza izvi, asi zvikwata zvinogona kuve nezvakakonzera kutendeuka kwako. Kushumira sechidimbu chakachena uye chakajeka chechigadzirwa chako, nhovo dzebhuti inzvimbo yakawanda yekuisa mune imwe yako chinonyanya kukosha mazwi ako ane chinhu chako pakutengeswa kubva kune yakanakisisa mativi.
Chikamu chekupedzisira cheji rako reAmazon rinoonekwa kune mushanyi ndechimwe tsanangudzo yemugove wako. Chaizvoizvo, iyo yakawedzerwa shanduro yezvinyorwa zvezvikwata. Chii chinowedzera - maererano neAmerica akashandura algorithm, chikamu ichi hachidikanwi zvisina kufanira, zvishoma nokuda kwehutano hunoshandiswa nevashandi. Kunyange zvakadaro, kuva nechirondedzero chakakwana chegadziriro yemagetsi kuchiri kukosha. Zvechokwadi, kana iwe uchida kuronga zvakanaka paAmazon.
Chikamu ichi chemashure keywords uye mazwi okutsvaga hachisi kuonekwa kune vashanyi vako. Asi chikamu ichi chinonyatsotarisirwa kutakura mamwe ose ezvakakosha mazwi enyu - kungofanirwa kuenzanisa zvinangwa. Nenzira iyo, yeuka kuti Amazon inodzokera mazwi makuru ndiyo nzvimbo yakanakisisa yekuisa zvese zvaunotora mazwi makuru izvo zvange zvisati zvamboiswa mubhuku rako remaitiro kana tsanangudzo yemagetsi. Ezvo iwe uchava nemukana unonzwisisika wekudzoka pane imwe nguva uye kugadziridza kuitira kuti chikamu chemhando yakakodzeka yegodhi rakagadziriswa chinotsiva kubudirira kuita zviduku zvinyorwa mumusoro wako wechigadzirwa, tsanangudzo, kana urongwa hwehuwandu hwemashoko.